3 qof oo rayid ah ayaa dhintay tiro kalena waa ay dhaawacmeen kaddib markii ay shufto rasaas ku fureen gawaari inta u dhaxaysa Gaalkacyo iyo Cagaaran – Radio Daljir
Juunyo 4, 2012 12:00 b 0
Gaalkacyo, June, 04 ? Inta la hubo 3 qof oo rayid ah ayaa geeryootay tiro kalena dhaawac ayaa soo gaaray, kaddib markii xalay ah shufto 2 baabuur ku rasaaseeyeen inta u dhaxaysa magaalada Gaalkacyo iyo tuulada Cagaaran ee gobolka Mudug.
Talye ku xiggeenka qaybta booliska gobolka Mudug Maxamed Jaamac Maxamuud ?Beergeel? oo maantay shirjaraa?id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in dhaawacyadii dadkii ku waxyeeloobay rasaastaasi in lagu daawaynayo isbitalka dhexe ee magaalada Gaalkacyo.
Talye Beergeel ayaa sheegay inay tageen goobta shilku uu ka dhacay, xilligaana ay wadaan baaritaano xooggan oo lagu baadi-goobayo shuftadaasi. Maxamed Jaamac Maxamuud ?Beergeel? talye-kuxiggeenka ciidanka booliska gobolka Mudug waxaa uu sheegay in goobta uu shilku ka dhacay ay gaareen shilka kaddib ciidamo ka tirsan kuwa nabad-galyada ee gobolka Mudug, kuwaasoo ku sugnaa halka loo yaqaan Laanta Dusmada oo u dhaxaysa tuulada Cagaaran iyo magaalada Gaalkacyo.